Mpanamboatra kaody QR maimaim-poana amin’ny Internet | Manaova kaody QR
Generator kaody QR maimaim-poana
Kaody QR dia kaody bara roa-refy misy fampahalalana voafaritra, ho an’ny fidirana haingana ampiasana fakan-tsary finday.
Ny kaody QR novokarina dia mety misy fampahalalana: rohy mankany amin’ny tranokala sy tambajotra sosialy, WhatsApp sy Telegram, adiresy mailaka, nomeraon-telefaona, angona data Wi-Fi, karatry ny orinasa na olona manokana. Toy ny fampahalalana hafa ampiasaina amin’ny fiainana andavanandro. Ny mpanamboatra an-tserasera anay dia hanampy anao hamorona kaody QR maimaim-poana, haingana sy haingana araka izay tratra.
Mamorona kaody QR »
Sintomy ny sary famantarana na safidio ny misy
Loko kaody QR
Ny habeny 200300400500600700800
Quality Low Ny salanisa Avo Best
Famolavolana kaody QR
Toerana adiresy (URL)
Lohahevitry ny hafatra
Karazana tambajotra WEP WPA/WPA2 Tsy misy encryption
Karazan-karama Hividy izao Manampy ny hovidiana Donation
E-mail Adiresy mailaka ny mandray vola
Sandam-bola USD EUR AUD CAD CZK DKK HKD HUF JPY NOK NZD PLN GBP SGD SEK CHF
Ny tahan’ny hetra
1 BTC = 50858.23 USD
1 USD = 1.966E-5 BTCLast update: December 07 2021
Rohy Google Play
Rohy App Stores
Hiteraka kaody QR
Mety ho elaela vao hiseho ilay fango amin’ny kaody QR. Andraso ny fampidinana.
Mora ny mamorona kaody QR
Mamorona kaody QR miaraka amin’ny mpanamboatra anay amin’ny tsindry vitsivitsy vitsivitsy. Misafidiana endrika iray, ampanjifaina ny loko loko QR, ampio sary famantarana ny orinasa, ampidiro ny angona ilaina amin’ny fampitana ary mamorona kaody QR. Sintomy amin’ny vahaolana avo lenta ary ampiasao izy hahasarika mpanjifa vaovao, hampitombo ny varotra na hanakalo fampahalalana mahasoa amin’ny alàlan’ny kaody QR. Maimaimpoana ny famoronana kaody QR ary tsy mila fisoratana anarana amin’ilay tranonkala.
Ny fampidinana ny kaody QR novokarina dia hita amina endrika maromaro: PNG, SVG ary ESP amin’ny vahaolana avo lenta, avo lenta ary maimaimpoana tanteraka. Ataovy miavaka ny famolavolana mifanaraka amin’ny zavatra takinao, safidio ny endrika kaody QR mety indrindra ary ampidino izany tsy misy fatiantoka kalitao raha ampiasaina bebe kokoa amin’ny asa sy fialamboly.
Mpamorona kaody QR ho an’ny tranokala
Te hampiditra mpamorona kaody QR amin’ny tranokalanao ve ianao sa hanao serivisy famoronana kaody QR feno? Adikao fotsiny ny kaody etsy ambany amin’ny toerana irina amin’ilay tranonkala. Maimaimpoana ary tsy mila fahalalana momba ny programa. Aorian’ny fampidirana an’ity kaody ity, ny mpampiasa ny tranokalanao tsirairay dia hanana fidirana amin’ny mpamokatra kaody QR an-tserasera.
<iframe src="https://free-qr.com/mg/generator.php" frameborder="0" scrolling="yes" width="100%" height="100%" loading = "lazy"></iframe>
Ampianaro izahay hanatsara ny serivisy. Azafady mba ampianaro amin’ny mailaka anay ny lesoka rehetra hita tao amin’ny fandikan-teny: translate@free-qr.com.
Safidio ny fiteninao